SL – gaadiidka baasaska External link, opens in new window.
Waxholmsbolaget – gaadiidka doomaha External link, opens in new window.
Ku cusub magaalada Stockholm – nyistockholm.se External link.
Warbixin ku saabsan dalka Iswiidan – www.informationsverige.se/Somaliska External link.
Wasaaradda arrimaha waxbarashada - Skolverket External link, opens in new window.. Waxaad halkaan ka heleysaa warbixin ku saabsan hab-shaqaynta dugsiyada dalka Iswiidan.
Wasaaradda taclinta sare - Högskoleverket External link, opens in new window.
Ruqsadda degenaanshada (sharciga) dalka Iswiidan – Warbixinnada faahfaahsan ee xiriirka la leh codsashada Ruqsadda degenaanshada (sharciga), Ruqsadda shaqada (sharciga), magangeliyada ama jinsiyada kala xiriir Hay’adda Socdaalka, Migrationsverket External link, opens in new window..
Svenska för invandrare (SFI) External link, opens in new window.